Waa maxay guur: Baro 3 waxyaabood uu guurka leeyahay
Waxaan maanta qormadeena ku soo qaadaneynaa waa maxay guur, Maxaase lagu macneeyaa erayga guur. Guurka macnahiisu waxaa garanayo qof walbaa.
Laakin kama hadlayo in la is guursado misana qoys la sameyso balse waxaan rabnaa inaan sharaxno macnaha erayga guur. Guurku waa nasteexo, waa wax loo baahan yahay.
Baro 3 waxyaabood uu guurku leeyahay
Guur: Xaflad Aroos
Haddii aan nahay dhalinyaro waxaan dooneynaa guur, inaan guursano, awlaad aan dhalno, nolol qurux badan ku noolaano. Nolol aanan cidlo dareemeynin misana aad ku faraxsantahay.
Su,aasha ugu horeyso ee aan isweydiineyno ayaa ah waaa maxay guur waana su,aal u baahan inaan fahanno ka hor guurka, si guurkeenu uu u noqdo mid miro dhal ah.
1. Waa maxay Guur?
Guurku waa nasteex, waa aasaaska aadanaha nolosha, Guurka waa wax laga maarmaan ah, noloshu bilaa guur aysan macno lahayn. Guurku waxaa afafka qalaad lagu yiraahdaa (Afka ingiriis: Marriage: Af Carabi: زواج) Guurku waxa uu kamid yahay dhacdooyinka ay ku midoobaan sida nin iyo naag, kuwaasoo ugu dambeys hadafkooodu yahay in ay nolol wadaagaan, iskana caawiyaan wax walbaa oo noloshooda ku saabsan.
Waxaa labada qofood ka dhexeeyo isla shaqeyn. Guurku waa wada nolaasha, in noloshu laba qofood ay ku wadaagan. Waxaa uu inta badan ka bilaawdaa jaceyl ay isu qabaan labo qofood. Marmarka qaar waxaa dhacdo in ay is guursadaan laba qofood oo aan weligood jaceyl ama sheeko aanan dhex marin.
Guurku waa heshiis ama ogolaansho ka dhexeeyo labada qofood. Waxaa mararka qaar dhacdo in nin uu jeclaado gabar misana loo soo doono iyadoo weliba laga yaabo inaysan raali ka ahayn guurkaasi balse ixtiraameyso waalidkeed.
Dhaqanka nuucaasi ah wuxuu jiri jiray waa hore balse maanta waa mid gabaabsi ah. Maxaa ka dhigayo gabaabsi? Sababtoo ah waxaa batay dhibaatadiisa. Labo qof oo aan raali isku ahayn weey adag tahay inay sii wada noolaadan. Dhibaatada ugu horeyso waxay ka imaaneysaa isfahanka waana sababta ay muhiim u tahay in qofka dooqiisa loo daayo.
Waxaa inta badan dhacdo in nin uu soo doonto gabar, markii loo guuriyana uu ku ciyaaro gabarnimadeeda kaidbna uu soo furo, waalidkeed waxaa laga yaabaa inaysan taa ka fikirin, qofka la noolaanayo ninkaasi waa gabadha la soo doontay ee ma ahan reerka. Guurka waa inuu ahaado mid aanan murugo lahayn misana farxad badan.
Qofk markuu qof kale guursanayo waxay ku haboontahay inay iyaga heshiiyaan, si qoyskaasi uu u noqdo mid farxad badan. Qof walbaa wuxuu ku haminayaa inuu la noolaado qofka riyadiisa ah. Laakin qof aanan dooqaagaba ahayn inaad la noolaato wey adag tahay.
Muhiim ma ahan qofka aad guursaneyso inuu ahaado taajir ee muhuumadu waxay tahay inaad adigu ku faraxsantahay. Macno ma sameyneyso hadduu lacag kastaa qofka leeyahay balse aadana adigu ku qanacsaneyn. Maalinta guurka ma ahan inay noqoto maalin murugo leh ee waa inay ahaataa maalin farxad badan.
Waxaa inta badan la arkaa lamaane isguursanayo misana midkood uu ka muuqato murugo qaasatan gabadha. Dadka intooda badan waxay umaleeyaan in gabadhu ay ka baqeyso habeenka aqal galka balse sidaas ma ahan. Maxaa keenayo cabsidaasi? Wax kale ma ahan waa nin aysan aqoonin dhaqankiisa, kaftankiisa, la hadalkisa iyo qofka uu yahay. Ma taqaano sida ay wax noqonayaan sidaa darteed waxay xaq u leedahay inay cabsato.
Waxaa suurto gal ah in ay xiriir la leedahay qof kale oo ay jeceshahay misana heysato oraahdii ahayd, Murugo jaceyl maxaa ibaday?
Guurka waa mid soo jireen ah, soona bilaawday waa hore, hadda dadyowga dunida waxay leeyihiin nidaamyo iyo caadooyin kuwaasoo inta badan ku saleysan dhaqan, dhaqaalo, diin iyo wada noolaasho.
Dhaqankeenii hore waxaa kamid ahaa, lamaanaha isguursanayo in la isu guuriyo laakin hadda waa gabaabsi. Waxaan kor ku soo xusay in guurka la isku guuriyo dhibaatooyinkiisa ay badan yihiin.
Waxaa dhacday nin oday ahaa oo dhalay gabdho fara badan, gabdhihiisa waxaa inta badan soo doontay rag aysan is afgaraneyn macnaha uusan heshiis dhex marin.